ESI EHICHAPU TEEPU NA ODNOKLASSNIKI - ỤMỤ KLAS - 2019
Nhicha teepu na Odnoklassniki
Mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta, enwere ọnọdụ mgbe ọtụtụ mgbe sistemụ dị mkpa iji rụọ ọrụ na-achọ ikike naanị. Iji mee nke a, enwere akaụntụ pụrụ iche aha ya bụ "Nchịkwa". N'isiokwu a anyị ga-ekwu banyere otu esi agbanye ya na abanye na ya.
Anyị na-abanye na Windows n'okpuru "nchịkwa"
Na nsụgharị niile nke Windows, malite na XP, nchịkọta onye njikwa nchịkwa dị, ma akaụntụ a ejirila ndabara maka ihe nchekwa. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na mgbe ị na-arụ ọrụ na akaụntụ a, ikike kachasị mma ịgbanwe mpaghara ma rụọ ọrụ na usoro faịlụ na ndekọ na-agụnye. Iji mee ka ọ rụọ ọrụ, ị ga-emerịrị usoro omume. Ọzọ, ka anyị chọpụta otu esi eme ya na mbipụta dị iche iche Windows.
Enwere ike rụọ ọrụ akaụntụ "Nchịkwa" na ụzọ abụọ: site na Kọmputa Management snap-in na iji console Windows.
Usoro 1: Nchịkọta Kọmputa
Right-click na kọmputa akara ngosi na desktọọpụ ma họrọ ihe "Management".
Na windo nke na-emepe, mepee alaka "Ndị ọrụ mpaghara na otu dị iche iche" ma pịa na folda ahụ "Ndị ọrụ".
Ọzọ, họrọ onye ọrụ na aha ahụ "Nchịkwa", tinye ya na RMB wee gaa Njirimara.
Chọpụta ihe na-ekwenyeghị na ntinye a, wee pịa "Tinye". A ga-emechi windo niile.
1. Iji malite njikwa, gaa na menu. "Malite - Ọrụ"anyị na-ahụ ebe ahụ "Iwu Iwu", pịa ya na RMB ma gaa na agbụ "Di elu - Na - agba ọsọ dịka onye nchịkwa".
Na njikwa, anyị na-ede ihe ndị a:
onye nchịkwa nchịkwa Nchịkwa / nọ n'ọrụ: ee
Anyị pịa Tinye.
Iji banye na Windows n'okpuru akaụntụ a, pịa igodo ọnụ CTRL ALT + Kwụsị na nchịkọta nke mepere emepe, họrọ ihe ahụ "Akara".
Mgbe ntọhapụ, pịa na mkpọchi mkpọchi na n'akụkụ aka ekpe ala anyị na-ahụ onye ọrụ anyị nyere ọrụ. Iji banye, họrọ ya na listi ma mee usoro nbanye nyocha.
Ụzọ iji mee ka akaụntụ nchịkwa dị otu na Windows 10 - nbanye "Nchịkwa Kọmputa" ma "Iwu Iwu". Iji tinye, pịa RMB na menu. "Malite"gbanye ihe "Kwụsị ma ọ bụ pụta"wee họrọ "Ọpụpụ".
Mgbe ịbanye ma na ịpị ma wepu ihuenyo ahụ, taịl ga-apụta na aha ndị ọrụ, tinyere onye nchịkwa. Ịbanye na ya bụkwa ụzọ dị mma.
Usoro maka ịrụ ọrụ "Onye nchịkwa" n'ime "asaa" abụghị nke mbụ. Ihe omume ndị dị mkpa na-eme na usoro ọhụrụ. Iji jiri akaụntụ ahụ, ị ​​ghaghị ịbanye na menu "Malite".
Na ihuenyo nnabata, anyị ga-ahụ ndị ọrụ niile a na-arụ ọrụ ugbu a. Họrọ "Onye nchịkwa" wee banye.
Ntinye nke akaụntụ nchịkwa na XP na-eme n'otu ụzọ ahụ dịka ọ dị na ikpe ndị gara aga, mana ntinye dị ntakịrị mgbagwoju anya.
Mepee menu "Malite" ma gaa "Ogwe njikwa".
Pịa ugboro abụọ na ngalaba "Akaụntụ Ndị Akaụntụ".
Soro njikọ "Gbanwee Ịnye Nbanye".
Lee, anyị na-etinye ma daws na pịa "Na-etinye Ngalaba".
Gaa na menu menu ma pịa "Akara".
Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Ngbanwe onye ọrụ".
Mgbe ntọhapụ anyị na-ahụ na ohere ịnweta "akaụntụ" nke Nchịkwa ahụ apụtawo.
Taa, anyị amụtala iji mee ka onye ọrụ jiri aha "Onye nchịkwa" rụọ ọrụ ma banye na ya. Buru n'uche na ihe ndekọ a nwere ikike ndị ọzọ, ma na-arụ ọrụ n'okpuru ya enweghi nchedo mgbe niile. Onye obula ma obu nje bu onye nwere ike inweta kọmputa ga enwe otu ikike, nke nwere oke nsogbu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme omume ndị a kọwara n'isiokwu a, mgbe ị gachara ọrụ dị mkpa, gbanwee gaa na onye ọrụ ọ bụla. Ọchịchị a dị mfe na-enye gị ohere ịchekwaa faịlụ, ntọala na data nke onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịwakpo ya.